RASMI: Philippe Coutinho Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Ambobaxay Bayern Munich & Kooxda Uu Kusii Jeedo Oo Uu Caddeeyey - Gool24.Net
RASMI: Philippe Coutinho Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Ambobaxay Bayern Munich & Kooxda Uu Kusii Jeedo Oo Uu Caddeeyey
Xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho ayaa ku dhawaaqay inuu ka tegayo Bayern Munich kaddib markii uu xalay kula guuleystay Koobka Champions League isaga oo xili ciyaareed amaah ah kula joogay Bavaria.
Coutinho ayaa beddel kusoo galay qaybtii dambe ee ciyaartii xalay ay Bayern Munich 1-0 kaga adkaaday PSG ee ay ku qaadday koobka Champions League, waxaana farxaddii uu ciyaartoyda kooxdiisa kula wadaagay gudaha garoonka kaddib uu la hadlay warbaahinta, waxaanu caddeeyey inuu soo dhamaaday waqtigiisii Munich oo uu hadda xidh-xidhanayo.
Laacibkan ayaa si buuxda ugu macasalaameeyey ciyaartoyda garoonka dhexdiisa, waxaanu caddeeyey halka uu kusii jeedo oo ah inuu ku laabanayo kooxdii uu amaahda kaga yimid ee Barcelona, laakiin waxa uu xusay in aanu hubin inuu kusii negaan doono iyo inuu sii dhaafi doono.
“Dabcan, waa inaan ku laabto Barcelona, kaddibna waynu arki doonaa waxa dhaca.” Ayuu yidhi Coutinho oo la hadlayay Movistar+ kaddib farxaddii guusha Champions League.
Coutinho waxa uu sheegay in aanu in badan ka fikirin mustaqbalkiisa maadaama uu kaliya ku guuleysiga Champions League diiraddiisu saarnayd, waxaanu yidhi: “Run ahaantii in badan kamaan fikirin, kaliya waxay diiraddaydu saarnayd finalka. Laakiin waxa kaliya oo ee aan idiin sheegi karayaa waa inaan doonayo inaanh aad u shaqeeyo oo aan sannad wanaagsan qaato, balse waynu arki doonaa waxa dhaca.”
Kubbad-sameeyaha reer Brazil waxa uu Bayern Munich kula guuleystay dhamaan tartamadii ay ka qayb-galeen xili ciyaareedkan, waxaanu ku dooday inuu yahay xili ciyaareed aad ugu wanaagsanaa, waxaanu yidhi: “Waxaanu qaadanay xili ciyaareed wanaagsan, aadna waan ugu faraxsanahay. Waanu u qalanay guushan, waana dareen gaar ah.
“Way igu adag tahay inaan sharraxo, aad ayaan u faraxsanahay, aadna waanu u damaashaadaynaa maanta.”
PSG waxay heshay fursado badan oo ay ciyaarta guusheeda ku heli karaysay, balse Coutinho waxa uu ku dooday in kulamada final-ka intooda badan waxyaabo yaryar ay go’aamiyaan, waxaanu yidhi: “Finalada mar walba waa sidan oo kale. Waxa go’aamiya waxyaabo yaryar. Waxa aanu xakamaynay dareenkayaga, haddana waxaanu nahay horyaalka.”